फेयर मार्फत स्टुडेण्टहरुले फस्ट हेन्ड सुचना पाउनेछन् |
अन्तवार्ता आइतबार, २९ साउन, २०७४
एक्सपर्ट एजुकेसन एण्ड भिसा सर्भिसेज, पुतलीसडक काठमाडाैं
डेढ दशकदेखि अष्ट्रेलिया अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई परामर्श प्रदान गर्दै आइरहेको एक्सपर्ट एजुकेसन एण्ड भिसा सर्भिसेजले यही श्रावण ३१ गते होटल अन्नपूर्णमा अष्ट्रेलियन एजुकेशन फेयरको आयोजना गर्दैछ । अष्ट्रेलियन एजुकेशन फेयर तथा एक्सपर्ट एजुकेसन एण्ड भिजा सर्भिसेजको गतिविधिको विषयमा केन्द्रित रहेर एक्सपर्ट एजुकेसन एण्ड भिसा सर्भिसेजका प्रबन्ध निर्देशक खेम संग्रौलासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः—
उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि अष्ट्रेलिया नेपाली विद्यार्थीहरुको पहिलो रोजाई रहँदै आएको छ । तर, अष्ट्रेलियामा विभिन्न श्रेणीका युनिभर्सिटी र कलेजहरु छन् । गुणस्तरियता र शुल्कको हिसावले सबैको आ—आफ्ना सीमा छ । कुन विषय पढ्ने ? कुन शहरको कलेजमा पढ्दा सहज हुन्छ ? कुन विषय पढ्दा आर्थिक रुपले सुलभ हुन्छ ? के के गरियो भने अष्ट्रेलियामा अध्ययन अनुमति मिल्छ ? जस्ता, विषयमा विद्यार्थीहरुको तीब्र जिज्ञासा पाईन्छ । यसका लागि विभिन्न ठाउँमा बुझ्दै हिड्न अहिलेका अभिभावक र विद्यार्थी दुवैसँग समय छैन । त्यही भएर हामीले अष्ट्रेलियाका विभिन्न युनिभर्सिटी र कलेजहरुलाई एकै ठाउँमा भेला गराउने उद्देश्यले अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर गर्न गइरहेका छौं । जसमार्फत नेपाली विद्यार्थी र अभिभावकहरुले एकै थलोमा अष्ट्रेलियाको एजुकेसनको विषयमा बुझ्न सकुन् । उनीहरु अष्ट्रेलिया जाँदा कुनै पनि समस्यामा नपरुन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अर्काेतर्फ फेयरमा कलेज र युनिभर्सिटीका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिती रहने हुँदा विद्यार्थीहरुले ‘फस्ट हेण्ड’ जानकारी पनि प्राप्त गर्न सक्छन् ।
विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई हामीले भन्दा स्वयंम कलेज तथा युनिभर्सिटीका प्रतिनिधिहरुलेपरामर्श दिनु बढी विश्वास योग्य हुन्छ । जहाँ पढ्न गईन्छ, त्यही संस्थाको प्रतिनिधीले उसको संस्थाको विषयमा दिएको सुचना झनै प्रभावकारी हुन्छ । त्यसैगरी अष्ट्रेलियाको कलेज र य्निभर्सिटीको प्रतिनिधिले यो यो सुविधा पाईन्छ भनेर बताए अनुसारको सुविधा, भोलि सम्वन्धित कलेजले दिएन भने विद्यार्थीलाई दावी गर्न सजिलो हुन्छ । तपाईले यो भन्नु भएको थियो, किन भएन भनेर उनीहरुले तत्कालै सोध्न सक्छन् । यस्ता विषयहरुमा फेयर झनै प्रभावकारी हुने भएकाले हामीले आयोजना गरेका हौं ।
अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुको सम्वन्धमा उनीहरुको शैक्षिक योग्यतालाई विशेष महत्व दिने गरिन्छ । खासगरी उच्च प्राप्ताङ्क छैन भने अष्ट्रेलियाको भिजा लाग्दैन भन्ने सुनिन्छ ।
बजारमा सुनिने यस्ता विषयहरुमा कत्तिको सत्यता छ ?
अष्ट्रेलियाका शैक्षिक नियमहरु भइरहन्छन् । पछिल्लो पटक २०१६ को जुलाईमा परिर्वतन भएको नियमले विदेशबाट अष्ट्रेलिया पढ्न जाने विद्यार्थीलाई नियमन गरिरहेको छ । उक्त नियमलाई Simplified student visa framework भनिन्छ । पहिला पहिला पचास प्रतिसत अंक ल्याएका विद्यार्थीहरु पनि अष्ट्रेलिया जाने गर्दथे । त्यस्ता धेरै विद्यार्थीहरुले राम्रोगरी पढ्न नसकेको घटनाहरु भेटिएपछि Simplified student visa framework ले एउटा स्तर निर्धारण गरेको छ । जसले कम्तिमा पनि साठी प्रतिसत अंकको माग गर्दछ ।
एक्सपर्ट एजुकेसन एण्ड भिजा सर्भिसेज सन् २००३ मा अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा स्थापना भएको हो भने नेपालमा सन् २००६ बाट यसले सेवा दिन थालेको हो । नेपालमै काम गरेको समयलाई हेर्ने हो भने पनि हामीहरु ११ वर्षदेखि काम गरिरहका छौं । ११ वर्षदेखि काम गरिरहेका छौं भन्नुको अर्थ अब हामीसँग यथेष्ट अनुभव छ । सिड्नीमा स्थापना हुँदा हामीसँग ३ जना कर्मचारी थिए भने नेपाल (काठमाण्डौं) मा काम सुरुगर्दा पनि हामीसँग ३ जना नै कर्मचारी थिए । आज एक्सपर्ट एजुकेसन एण्ड भिजा सर्भिसेजको काठमाण्डौंमा मात्रै पैंतालिस जना काम गरिरहेका छौं । त्यसैगरी नेपालभर चितवन, टाँडी, कावासोती, बुटवल, पोखरा, विर्तामोड, दाङ, धनगडी र नेपालगञ्ज लगायतका स्थानहरुका हाम्रा शाखा कार्यालय पनि स्थापना भइसकेका छन् । त्यसैगरी अष्ट्रेलियाको विभिन्न सहरहरुमा पनि हामीले शाखा स्थापना गरिसकेका छौं । करिव पच्चिस हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरुले हामीसँग सेवा लिइसकेका छन् । गतबर्षबाट एक्सपर्ट एजुकेसन एण्ड भिजा सर्भिसेजले बंगलादेशबाट पनि आफ्नो सेवा दिन थालेको छ भने छिटै नै हामी भारत र फिलिपिन्समा पनि एक्सपर्ट एजुकेसन एण्ड भिजा सर्भिसेजको सेवा सञ्चालन गर्न गइरहेका छौं । अर्काेतर्फ हामीले विद्यार्थीहरुलाई अष्ट्रेलिया पु¥याउने मात्र होइन, पुगेपछि एपोर्टमा रिसिभ गर्नेदेखि लिएर त्यहाँ उनीहरुले कुनै पनि समस्या बेहोर्नु प¥यो भने अष्ट्रेलियामा रहेका हाम्रा शाखा कार्यालयहरु मार्फत समाधान पनि गर्ने गर्छाै । यि सम्पूर्ण कार्य, अनुभव, निरन्तरता र उपलब्धीले नै एक्सपर्ट एजुकेसन एण्ड भिजा सर्भिसेजके हो भन्ने कुरा आफैं स्पष्ट हुन्छ ।
एक्सपर्ट एजुकेसन एण्ड भिजा सर्भिसेजको तर्फबाट वा संस्थागत रुपमा भन्नुपर्दा हामीले एक्सपर्ट फाउण्डेसन सञ्चालन गरिरहेका छौं । हामीबाट सेवा लिएका हरेक विद्यार्थीबाट प्राप्त शुल्क मध्ये दुई हजार रुपयाँ एक्सपर्ट फाउन्डेसनलाई छ्ुट्याउने गर्दछौं । भूकम्पको समयमा एक्सपर्ट फाउन्डेसनले नुवाकोटमा १० हजार डरल बराबरको काम गरेको थियो । नेपाली क्रिकेटको वृत्तिविकासका लागि स्कुल तहका विद्यार्थीहरु लक्षित गरेर हरेक वर्ष क्रिकेट प्रिमियर लिग आयोजना गरिरहेका छौं । फाउन्डेसनबाट भुकम्पको समयमा भत्किएको सिन्धुपाल्चोक स्थित सेलाङको हाईस्कुलमा १० लाख रुपयाँ दिएर पुन निर्माण ग¥यौं । यस्ता धेरै सामाजिक काम गरेका छौं र आगामी दिनमा यसलाई थप ब्यापक बनाउँदै लैजाने छौं ।